ဖုန္းမွာ Root လုပ္တယ္ဆိုတာ ဘာလဲ? – ရွှေအလင်း
ဖုန္းမွာ Root လုပ္တယ္ဆိုတာ ဘာလဲ?
ပထမဆုံးအေနနဲ႔ Android မွာ Root လုပ္တယ္ဆိုတာဘာလဲ ဒါကို အလြယ္တကူရွင္းၿပထားပါတယ္။
Android OS က Linux အသုံးၿပဳေ၇းသားထားတဲ႔ System တစ္ခုပါ။ ” Root ” ရဲ႔သေဘာတရားက သင္႔ရဲ႔ Device ကို “Superuser” ရရွိေအာင္လုပ္တာဆိုလဲ မွန္ပါတယ္။
ေတြက တစ္စုံတစ္ခုအတြက္ အားေပးအားေၿမွာက္ၿပီး သေဘာတူညီမူမေပးပါဘူး။ ျပီးေတာ႔ Root လုပ္ၿပီးအသုံးၿပဳတဲ႔အတြက္ သူတို႔က သင္႔ကို တားဆီးပိတ္ပင္တာတာေတြ မလုပ္ႏူိင္ပါဘူး။
သင္႔ရဲ႔ဖုန္းကို Root မလုပ္ခင္မွာ ေအာက္မွာေဖာ္ၿပထားတဲ႔ အခ်က္ေလးေတြဖတ္ထားဖို႔လိုပါတယ္။
၄. Root လုပ္တဲ႔အခါ ေသခ်ာဂရုစိုက္ၿပီး ၊ အဆင္႔ေတြကို ၂ ခါၿပန္စစ္ေပးပါ။
၅. Root မလုပ္ မိမိဖုန္းထဲမွာရွိတဲ႔ အေရးၾကီးတဲ႔ Data ေတြကို Backup လုပ္ထားေပးပါ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Android မှာ Root လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ ဒါကို အလွယ်တကူရှင်းပြထားပါတယ်။
Root ဆိုတဲ့စကားလုံးက Linux သုံးတဲ့ User တွေကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ စကားလုံးပါ။
Android OS က Linux အသုံးပြုရေးသားထားတဲ့ System တစ်ခုပါ။ ” Root ” ရဲ့သဘောတရားက သင့်ရဲ့ Device ကို “Superuser” ရရှိအောင်လုပ်တာဆိုလဲ မှန်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Android Software မှာ Permissions ရအောင်ပြုလုပ်တာပါ။
Root လုပ်ပြီးတာတဲ့ User အတွက် အထူး မြှင့်တင်ထားတဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့အတူ ၊ စွမ်းရည်မြင့်တင်ထားတဲ့
Custom Software (ROM) ၊Custom Themes , Performance ၊ Battery Life တွေရဲ့
အခြေံအားဖြင့် သင့်ရဲ့ Android device ကို ” Hacking ” ပြုလုပ်တာပါ။
Root လုပ်ပြီးတာနဲ့ မိမိဖုန်းကို Administrator အနေနဲ့ System တခုလုံးကို အပြည့်အဝ
ဥပမာအနေနဲ့ နိူင်းယှဉ်ပြရရင် Apple iPhone ရဲ့ ios ကို jailbreak လုပ်တဲ့ အလားအလာ ပုံစံနဲ့အတူတူပါပဲ။
Root လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် သင့် ဝယ်သုံးတဲ့ Android device ရဲ့ Manufacturers Or Mobile Operators
တွေက တစ်စုံတစ်ခုအတွက် အားပေးအားမြှောက်ပြီး သဘောတူညီမူမပေးပါဘူး။ ြပီးတော့ Root လုပ်ပြီးအသုံးပြုတဲ့အတွက် သူတို့က သင့်ကို တားဆီးပိတ်ပင်တာတာတွေ မလုပ်နိူင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ Android Phone ရဲ့ တချို့ Service တွေကိုအသုံးချဖို့ သင့် Root လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒရှိရင် သင့်ပြုလုပ်နိူင်ပါတယ်။
အခုလို Root User အနေအထားအထားရဖို့ သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို Root ပြုလုပ်ရတဲ့ အစီအစဉ်ကို
Android Rooting လုပ်ပြုလုပ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဖုန်းကို Root မလုပ်ခင် သတိထားရမဲ့အချက်
သင့်ရဲ့ဖုန်းကို Root မလုပ်ခင်မှာ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက်လေးတွေဖတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။
၁. သင့်ရဲ့ဖုန်းက Warranty Void ဖြစ်သွားပါမယ်။
၂. သင့်ရဲ့ဖုန်းကို Root လုပ်ဖို့အတွက် ဘာကြောင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းကို Root လုပ်ချင်တာလဲစတဲ့
၃. သင့်ရဲ့ဖုန်းကို Root လုပ်ဖို့အတွက် သေချာတဲ့ သင့်ဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ root လုပ်နည်း
သင့်ဖုန်း မော်ဒယ်အမျိုးအစားကြည့်ဖို့အတွက် အလွယ်တကူကြည့်နည်းက ဖုန်းရဲ့
အပေါ်ယံကာဘာ (သို့မဟုတ်) အများအားဖြင့် ဘတ်ထ္ထရီအောက်မှာ ရှိပါတယ်။
၄. Root လုပ်တဲ့အခါ သေချာဂရုစိုက်ပြီး ၊ အဆင့်တွေကို ၂ ခါပြန်စစ်ပေးပါ။
၅. Root မလုပ် မိမိဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Data တွေကို Backup လုပ်ထားပေးပါ။
ဆီးခ်ဳိျဖစ္​တာ… ႏွစ္​္၂၀ ရိွၿပီျဖစ္​တ့ဲဲ …အ​ေမ​…...
မေန႔က ထူးျခားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးေၾကာင့္ USA ေရာက္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္း...